Reddit 3.31.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.31.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား Reddit
Reddit ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Reddit အပေါ် 100K ကျော်တက်ကြွအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူသငျသညျ, ရယ်မောထင်ပါတယ်ဆွေးနွေးရန်နှင့်နက်ရှိုင်းသောသင့်အတွက်အရေးပါသည့်အကြောင်းအရာများသို့တူးနိုင်ပါတယ်။
Reddit မဲပေးရန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်, ရှယ်ယာ post မှလူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ open ဖြစ်ပါတယ်။
Reddit ကလူစွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် upvote နှင့် downvote ရေးသားချက်များ။ Reddit တွင်, သင့်ရဲ့ privacy နဲ့အမြင်သဘောထားများသည်အရေးကြီးသည်။
သင်သည်သင်၏အကျိုးစီးပွားဝေမျှသူတွေကိုသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်, ရုပ်ရှင်, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, အားကစား, တီဗီရှိုး, ဂီတနှင့်နည်းပညာအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်မျှဝေနိုင်ပါသည်။
Reddit ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက app ကိုနှင့်အတူသငျသညျအငျတာနကျပျေါတှငျအမြားဆုံးမကြာသေးမီခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူတက်ထားနိုင်သည်! ခြိုးဖောကျတဲ့သတင်းပထမဦးဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ဗီဒီယို, ရယ်စရာပြက်လုံးများနှင့်ပူလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုရှာဖွေပါ။ တရားဝင် Reddit app ကို, GIF များနှင့်ဗီဒီယိုများ, ညဥ့် mode ကိုနှင့်လျှပ်စီးအစာရှောင်ခြင်း-တင် interface ကိုအပါအဝင်အကြောင်းအရာစီးတစ်ခုအဆုံးမဲ့စာလိပ်နှင့်အတူ, သင်တို့အဘို့အကြောင်းအရာများအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာကိုရှာဖွေလွယ်ကူစေသည်။ တရားဝင် Reddit app ကို Chat ကို, ရပ်ရွာ Group မှ Chat ကိုနှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့သီးသန့်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
သငျသညျ, သငျသညျစိတ်ဝင်စားဖို့ကိုရှာဖွေမည်သည့်အသိုင်းအဝိုင်း join သင့်ရဲ့သတင်းရအကြံဉာဏ်တောင်း, အားကစားဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်၏ထင်မြင်ချက် voice နိုင်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံး subreddits ၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကိုယ်ပိုင် feed ကိုဖန်တီးပါ။ သင်တစ်ဦးသတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်၏လူမှုရေးအရတာဝန်ယူထားသော, အဆက်မပြတ် updated စီး, ပျော်စရာပုံပြင်များ, အားကစားဟောပြောပွဲ, ဂိမ်းများ, ဗိုင်းရပ်စ် pics ထိပ်တန်းလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗွီဒီယိုများသင်စိတ်ဝင်စားသောရနိုင်သည်။ သငျသညျဂိမ်းနှင့်အားကစားသို့ဆိုလျှင်သင်အကောင်းဆုံး Xbox နဲ့ PlayStation4အပေးအယူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ် NFL, NBA, MLB နှင့်ဘောလုံးဂိမ်းကိုဆွေးနွေးနေစဉ်, PUBG သို့မဟုတ် Fortnite မဟာဗျူဟာပြောဆိုပါ။
သငျသညျ, r / လူကြိုက်များသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့် Reddit အပေါ်ယိရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။
အထောက်အကူပြု & Share ကို
, ဓါတ်ပုံများ post ကိုလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု, ပုံပြင်များအထောက်အကူပြု Upload လုပ်ပါဆွေးနွေးမှုများ join နှင့်အခြားလူများအကောင်းဆုံးပုံပြင်များ, ဗီဒီယိုများ, pics, ဂိမ်းများ, နှင့်ပို့စ်များကို upvoting နှင့် downvoting နေဖြင့်သတင်းကိုကူညီရှာဖွေ။ ဝေမျှမယ်နှင့်အခြား redditors နှင့်အတူပို့စ်များကိုဆွေးနွေးပါ။
ချတ်နှင့်အဝန်း Group မှ Chat ကိုတရားဝင် Reddit app ကိုအပေါ်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ စကားပြောခန်း, အခမဲ့လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အစာရှောင်ပါ! သငျသညျနေရာတိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကအားလုံးကိုသင့်မိုဘိုင်းနှင့် desktop ပေါ်က devices တွေကိုဖြတ်ပြီးထပ်တူပြုပြီး။ သငျသညျ, r / Fortnite ကဲ့သို့သောအသိုင်းအဝုိင်းထဲမှာချက်တင်အခန်းကို join သို့မဟုတ်သိပ္ပံ, ရုပ်ရှင်များ, မိတ်ကပ်, အားကစား, သို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးရယ်စရာကြောင် GIF များအကြောင်းကိုတ-on-စကားဝိုင်းတစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်။
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖျော်ဖြေရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, သတင်း, အားကစား, DIY, ဗိုင်းရပ်စ်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု, ကြောင်, ကာတွန်းနှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူ ... သင်က Reddit ပေါ်တွင်သင်၏နေအိမ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Reddit အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Reddit အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Reddit အား အခ်က္ျပပါ
icenote8 စတိုး 2.43k 772.93k
Reddit ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Reddit အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.31.0
ထုတ်လုပ်သူ reddit Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.reddit.com/help/privacypolicy
လက်မှတ် SHA1: 8B:CA:1D:DA:8B:24:18:E5:30:0F:C9:1A:C4:3B:BF:21:12:90:79:2E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Mobile Apps
အဖွဲ့အစည်း (O): reddit Inc.
Reddit APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ